OUR brek diski - LAIZHOU SANTA BRAKE CO., LTD
breeki Santa na-enye diski breeki na drọm nke nwere ihe karịrị 90% mkpuchi ụgbọ ala, SUVs, gwongworo ọkụ/ọkara ọrụ n'okporo ụzọ. Anyị na-enye rotors na drum dị iche iche gụnyere Geomet mkpuchi, agba agba, ọkọlọtọ, na ụdị agbapu / oghere.
Ahụmịhe karịa afọ 15 n'ichepụta diski & drum breeki.
2005 Santa breeki tọrọ ntọala. Kemgbe ahụ, lekwasị anya naanị na diski breeki na drum.
2008 nwetara ISO 9001/ISO14001/TS16949.
2008-2020 Site n'aka ndị ahịa atọ nke USD1.5million ntụgharị kwa afọ nye ndị ahịa 50+ n'ụwa niile na-atụgharị kwa afọ karịa USD 25millions.
Ngwaahịa bụ TS16949&ECE R90 kwadoro
3500+ nọmba akụkụ dị iche iche, nkọwa ihe 10+. Na-ekpuchi diski breeki ụgbọ ala, ịgbà, diski gbapụrụ agbapụ, diski nwere oghere, diski a na-ese akụkụ ya, diski mkpuchi zuru oke (zinc-dusc, Geomet-yiri), diski breeki azụmahịa, wdg.
Dayameta na-ekpuchi site na 100mm ruo 460mm, nha diski niile.
Anyị na-ere 46% na Europe na 32% na America, nke bụ ahịa ọkọlọtọ kachasị elu n'ụwa. N'otu oge ahụ, anyị na-ere 14% na China iji gboo mkpa na-eto eto na ahịa China.
Mgbe ọtụtụ afọ nke mmepe gasịrị, Santa breeki nwere ndị ahịa gburugburu ụwa. Iji gboo ihe ndị ahịa chọrọ, anyị hibere onye nnọchi anya ahịa na Germany, Dubai, Mexico, na South America. Santa bake nwekwara ụlọ ọrụ dịpụrụ adịpụ na USA na Hongkong.
breeki Santa nwere sistemu njikwa mma zuru oke na-amalite site na nyocha nke akụrụngwa ruo mgbe mkpesa nyocha nke nnyefe, nke na-ekwe nkwa ngwaahịa anyị na ọnọdụ kwụsiri ike.
Anyị nwere àgwà nyocha akụrụngwa dị ka Microstructure na Image Analyzer, Carbon & Sulfur Analyzer, Spectrum Analyzer, wdg.
5 akpaka nkedo ahịrị na-akwado ihe onwunwe mma na mmepụta ike
Germany Technology machining ọrụ ụlọ ahịa ime ndidi n'ime OEM ọkọlọtọ
Ọgwụgwọ nha nha iji zere ịma jijiji nke diski
A na-anwale diski ọ bụla site na ahịrị nnwale akpaka tupu ịhapụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Ndị ahịa n'ụwa niile, zuru oke. Ụdị zuru oke nke ihe karịrị akwụkwọ ntụaka 3500
Na-elekwasị anya na diski breeki, dabere n'ịdị mma
Ịmara maka usoro breeki, mmepe ngwa ngwa na ntụnyere ọhụrụ.
Ike njikwa ọnụ ahịa dị oke mma
Nhọrọ kacha mma maka akụkụ breeki!
Maka ozi ndị ọzọ, biko kpọtụrụ anyị!
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị breeki drum volvo, Pads breeki na-arụ ọrụ, mpe mpe akwa breeki akpaaka, Ụgbọala akpụkpọ ụkwụ breeki, diski breeki, Ụgbọ ala breeki,